Warshadda Agarose ee Shiinaha iyo soosaarayaasha | HQG
Agarose waa polymer toosan oo qaab dhismeedkiisu yahay silsilad dheer oo isweydaarsiga 1, 3-ku xiran β-D-galactose iyo 1, 4-ku xiran 3, 6-anhydro-α-L-galactose. Agarose guud ahaan wuxuu ku milmaa biyaha markii la kululeeyo ilaa 90 ℃, wuxuuna sameeyaa jel fiican oo adag marka heerkulku hoos u dhaco ilaa 35-40 ℃, taas oo ah muuqaalka ugu weyn iyo aasaaska adeegsigiisa badan. Waxyaabaha lagu yaqaan 'agarose gel' waxaa badanaa lagu muujiyaa xoogga jelka. Awoodda oo sareysa, ayaa kafiican waxqabadka jel.
Daarooska daahirka ah waxaa badanaa loo isticmaalaa shaybaarka biochemistry iyada oo ah taageero semi-adag oo ku jirta electrophoresis, chromatography iyo teknoolojiyada kale ee kala-soocidda iyo falanqaynta biomolecules ama molecules-ka yar.
Agar-gel electrophoresis sidoo kale waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagukala saaro oo lagu aqoonsado asiidhyada nukleerka, sida aqoonsiga DNA, xaddidaadda DNA ee khariidadda nuclease diyaarinta iyo wixii la mid ah. Hawlgalkeeda ku habboon awgeed, qalabka fudud, cabbirka cabbirka yar iyo xallinta sare, habkani wuxuu noqday mid ka mid ah hababka tijaabada ah ee inta badan loo isticmaalo baaritaanka injineernimada hidaha.
Xoog gel: ≥1200g / cm² ² 1.0% jel）
Heerkulka gelling: 36.5 ± 1 ℃ ℃ 1.5 gel）
Heerkulka dhalaalida: 88.0 ± 1 ℃ （1.5 gel）
Hore: Beer Caddeynaya Wakiilka
Xiga: Cudurka Bakteeriyada